रवि लामिछानेसँग डेट जान चाहान्छु – अभिनेत्री कुशुम राउत – Life Nepali
काठमान्डौ। फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’की अभिनेत्री हुन् कुशुम राउत । आज शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मबाट कुशुमले अभिनयमा डेब्यु गरेकी हुन् । देशप्रेम र प्रेमकथामा निर्माण भएको फिल्म उनी भने अभिनेता साहिल श्रेष्ठको जोडी बनेकी छन् ।अभिनेता सरोज खनालले सञ्चालनमा ल्याएको एकेडेमी माला आर्टमा अभिनय प्रशिक्षण लिइरहेकी कुशुम नृत्य र द्व’न्द्वको प्रशिक्षणसहित अभिनयमा होमिएकी हुन् । पुतलीसडक धोवीधार निवासी कुशुमले कलाकारितमा शिखर चुम्ने सपना देखेकी छन् । कुशुम सानैदेखिको रहर पूरा गर्न कलाकारितामा होमिएकी हुन् ।- अभिनेत्री कुशुम राउतसँग रातोपाटीका पत्रकार कुवेर गिरीले गरेको कुराकानी।
फिल्मको अफर कसरी आयो ? – फिल्मको प्रोडक्सन मेनेजर गणेश सापकोटासँग पहिलेदेखि नै चिनजान थियो । भेटमा उहाँलाई मैले आफ्नो फिल्म अभिनय चाहना राख्ने गर्दथेँ । त्यसका लागि आफ्नो कोसिस र मिहिनेतसमेत बताएको थिए । तिमीलाई सुहाउँदो फिल्म पाए भन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । यो फिल्मको अफर उहाँले नै ल्याउनुभयो । फिल्मका लागि निर्माण युनिटले आयोजना गरेको अडिसन पास भएर फिल्ममा अटाए ।
अभिनयको पहिलो अनुभव कस्तो रह्यो ? – सोचेको भन्दा राम्रो गर्न पाए । निकै डर थियो । सिनियर कलाकारसँग काम गर्न सक्दिन कि भन्ने । फिल्ममा भुवन केसी सरदेखि धेरै सिनियर कलाकार हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँहरुसँग काम गर्न पाउँदा धेरै कुरो सिक्न पाएँ । उहाँले सिकाउनु पनि भयो । सजिलैसँग फिल्म पूरा भयो ।
पहिलो फिल्म रिलिजमा आउँदा कस्तो अनुभूति हँुदोरहेछ ? – मेरो अभिनयलाई दर्शकले के भन्ने हुन् भनेर एक किसिमको डर, नर्भस फिल भइरहेको छ । अर्काे कुरो पहिलो पटक पर्दामा आफूलाई देख्न पाउँदा एक्साइटेड पनि छु । अभिनयमा मैले आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दिने कोसिस गरेकी छु । रिजल्ट पनि राम्रो आउने आस छ ।
कस्तो भूमिकामा देख्न सकिन्छ ? – गाउँले केटीको भूमिका निर्वाह गरेकी छु । फिल्मको सुरुदेखि अत्यसम्म मेरो भूमिका त छैन । छोटो भए पनि दर्शकको नजरमा पर्ने खालको छ ।
तपाईं कस्ती केटी ? – म मिलनसार छु । तर जो कोहीसँग एकै भेटमा खुल्न भने सक्दिनँ । सङ्गत गर्दै गएपछि घुल्नसक्छु । सबैको कुरा सुन्ने र डिसिजन आफूले गर्ने बानी छ ।
मनपर्ने केटा ? – सिम्पल, स्पार्ट, जेन्टल, साँचो बोल्ने केटा मनपर्छ ।
प्रेम ? – छैन छैन । मेरो प्रेमी बनाउनेतिर अहिलेसम्म कहिल्यै ध्यान गएन । मेरो केटा साथी त धेरै छन् । तर प्रेमीको रूपमा कोही बनाएकी छैन ।अभिनय बाहेको रुचि ? – गीत गाउन मनपर्छ । कथा, उपन्यास पनि पढ्छु ।
सपना ? : एउटा सपना सफल कलाकार बन्ने छ । अर्काे इच्छा आफ्नो एउटा बिजनेस गर्नेछ ।
रोजेको व्यक्तिसँग डेटको अफर दियो भने ? : रवि लामिछानेसँग जान चाहन्छु । उहाँसँग भेटेर कफी डेट गर्दै गफ गर्ने इच्छा छ । उहाँको बोल्ने शैली मनपर्छ । उहाँले देशका लागि गरेको कुरा जायज लाग्छ ।
Previous के’टाको ख’डे’री’ ला’गेप’छि सा”मू’हिक बि’हेको अ’पिल ग’र्दै सु’न्दरी’हरु
Next फेसबुक : च्याट र भिडियो कलको माया – भेट्न पाएको छैन। होटल…….